L-Leucine Cas 61-90-5 Qiime, Badeecad ka socota Bolise
[Foomka Molecular] C6H13NO2
[Miisaanka Molecular] 131.17
[Muuqaalka] Cabbirrada cad ama budada kareemka ah
[Nadaafad] 99.5% ~ 101.5%
Waxaa loo adeegsaday sameynta isku-darka amino acid, waa ilaaliyaha beerka ee muhiimka ah.
Ku saabsan L-Leucine
L-Leucine waxaa badanaa loo isticmaalaa sida cuntada lagu daro iyo amino acid ee nafaqada. Iyadoo ay weheliso valine iyo isoleucine, leucine waa amino acid silsilad-wadaag ah. L-Leucine waxaa loo isticmaalaa inay ka kooban tahay tamarta nafaqada iyo nafaqada.
L-Leucine sidoo kale waxaa isticmaala jir dhisayaasha iyo ciyaartooyda qaarkood oo ah cunno lagu daro ama supplemen t koritaanka murqaha.